माइग्रेन के हो ? यसको लक्षण र उपचार – Makalukhabar.com
माइग्रेन के हो ? यसको लक्षण र उपचार
मकालु खबर	 २०७६ असार ३ ०१:४८ प्रकाशित 93 0
असार ३ । मानिसको कहिले काही टाउको दुख्नु एउटा समान्य हो तर लगातार टाउको दुःखी रहनु भनेको माइग्रेनको संकेत हुन सक्छ ।
माइग्रेन भन्नाले लामो समय सम्म देखिने टाउको दुख्ने रोग हो। सामान्य खालको माइग्रेनमा टाउको दुखाइ मात्र हुन्छ भने जटिल खालको माइग्रेनमा हात खुट्टाहरु नचल्ने, आँखा दुख्ने हुन्छ, हाम्रो देशका मानिसहरुमा देखिएको माइग्रेन आजसम्म सामान्य खालकै माइग्रेन हो ।
आजभोलि माइग्रेनको बिरामी दिन प्रतिदिन बढ्दै गईरहेको छ यो रोग पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी हुने गर्दछ । माइग्रेन बिशेष गरी २० देखि ५० वर्ष उमेरका व्यक्तिहरुमा धेरै देखिने हुन्छ । माइग्रेनको लक्षण र उपचार तल बताईएको छ ।
लक्षण– माइग्रेन हुँदा लगातार टाउको दुःखी रहन्छ । एक साता वा एक महिनासम्म औषधी खाएर पनि टाउको दुखेको निको हुँदैन ।
– लामो समय टाउको एकपाटा मात्र दुःखी रहन्छ भने पनि यो पनि माइग्रेनको लक्षण हो ।
– माइग्रेन भएपछि यो रोग पूर्णरुपमा निको हुन धेरै समय लाग्छ ।
– यो रोग लागेको व्यक्तिलाइ वाकवाक हुने र कहिलेकाहीँ बान्तासमेत हुने, हात खुट्टा चिसो हुने, कहिलेकाहीँ एकैपटक बेजोडसँग २४ घण्टासम्म टाउको दुख्ने गर्दछ ।
– यस रोग लागेका व्यक्ती धेरै हो–हल्ला, चर्को आवाज सुन्न, सहन गर्न नक्ने एकान्त र शान्त ठाउँमा बस्न मन पराउने हुन्छन् ।
– धेरै तनाव लिने र रातमा निद्रा नलाग्ने ।
उपचार– यदि मानिसलाई लामो समय सम्म टाउको दुःखी रहेमा एमआराई, टाउकोको सिटिस्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ र यदी माइग्रेन भएको हो भने यसको उपचार औषधी सेवन र अर्को माइग्रेन एट्याकबाट बच्न बिरामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई सुधार गरेर ।
– यस रोगीले धेरै चकलेट, आइसक्रिम खानु हुँदैन, धुलो धुवाँबाट बच्ने र अत्याधिक घाममा नहिँड्ने ।
– यस रोगीले दैनिक रुपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने यसका लागि दैनिक आधा घण्टा हिँड्ने, जाड रक्सी चुरोट सेवन नगर्ने ।
– यस रोगीले तनाव कम लिने रातमा पुरा निद्रा सुत्ने ।
एकनाथ ढकालले प्रधानमन्त्रीसँग भने, ‘मलाई सांसद बनाइदिनुस्’
इमरान खानसँग मोदीले आँख जुधाउन सकेनन्